“Fanabeazana ho olom-pirenena vanona maneho ny fitiavan-tanindrazana amin’ny alalan’ny fananganan-tsaina”. Io no lohahevitra nentina nanatanterahana ny hetsika fitiavan-tanindrazana amin’ny alalan’ny fampakarana ny sainam-pirenena, ho amin’ity taom-pankalazana ny tsingerin-taona faha-59 niverenenan’ny fahaleovantena sy ny nijoroan’ny Foloalindahy Malagasy ity. Nofaranana ny alatsinainy teo ny hetsika andiany voalohany amin’izany izay natao teo anivon’ireo ivontoeram-panabezana fototra miisa dimy teto an-dRenivohitra.
Voasambotry ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Ambodiangezoka Andapa ireo jiolahy raindahiny niaraka tamin’ny rongony efatra gony milanja 60 kg, ny alin’ny 12 hifoha 13 jona 2019 lasa teo. Araka ny fanazavan’ny zandary nandritra ny famotorana ireto jiolahy mpanao trafikana rongony ireo fa avy any amin’ny distrikan’i Bealanana izy ireo ary nikasa hitondra ireto zava-mahadomelina ireto ho any Andapa. Natolotra ny fampanoavana avy hatrany izy roa lahy ireto, ny alatsinainy teo taorian’ny famotorana nataon’ny zandary ka naiditra am-ponja vonjimaika.
Lehilahy roa indray matin’ny fitsaram-bahoaka tao Tanambao Daoud, distrikan’i Sambava, omaly tamin’ny 10 ora sy 30 mn. Fantatra tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana fa nanolana vehivavy iray izy roa lahy ireto ary tsy vitan’izay fa mbola novonoin’izy ireo koa ilay niharam-boina. Nodoran-dry zalahy ny fatiny taorian’izay. Nambaran’ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary fa tsy hitan’ny fianakaviana nandritra ny efatr’andro ity vehivavy niharam-boina ity ka ny alatsinainy hariva teo no nisy nahita izy izay efa ny fatiny sisa hita. Nanao ny fikarohana avy hatrany ny zandary, ireto roa lahy ireto no noahiahina ho tompon’antoka tamin’izany ka niharan’ny hatezeram-bahoaka. Nosamborin’ny olona avy hatrany anefa izy roa lahy ka niharan’ny fitsaram-bahoaka. Maty tsy tra-drano izy ireo. Nidina teny an-toerana ny zandary nandamina ireo andian’olona nanao fitsaram-bahoaka.